AFRIKA “SADDEXDII MUDDO” MAANIYA elections Doorashooyinkii madaxtinimada ee dhowaan ka dhacay Guinea iyo Ivory Coast - Amjambo Africa
AFRIKA “SADDEXDII MUDDO” MAANIYA elections Doorashooyinkii madaxtinimada ee dhowaan ka dhacay Guinea iyo Ivory Coast
Bishii Nofeembar 7, Alpha Condé, oo 82 jir ah, ayaa lagu dhawaaqay inuu ku guuleystey doorashadii madaxweynenimada ee Guinea, taas oo u siisey inuu mar saddexaad la wareego xafiiska.
Ivory Coast, Guinea deriskeeda koonfureed, sidoo kale dhawaan waxay dib u doorteen madaxweynahooda, Alassane Ouattara, oo ah 78 jir, markii saddexaad. Labada ninba waxay ku biirayaan naadiga sii kordheysa ee madaxweynayaasha afrika ee raadsaday shuruudo dheeri ah xafiiska markay dhacayaan muddadooda dastuurku oggol yahay laba xilli. Xubno badan oo ka tirsan ‘naadigan madaxweynenimada ah’ waxay heleen qaabab ay dib ugu eegaan dastuurka dalkooda oo ay meesha uga saaraan caqabadaha hortaagan in loo kordhiyo xafiiska.
Buugga ciyaaraha ee musharixiinta way kala duwan yihiin, laakiin natiijada waa isku mid. Alpha Conde, tusaale ahaan, wuxuu ku orday olole ah ‘fulinta wixii uu ku bilaabay ereyadii hore’; Alassane Ouattara wuxuu ku sifeeyey orodkiisa inuu ahaa ‘go’aan loola jeedo in lagu qanciyo rabitaanka umadda’ ka dib markii uu si lama filaan ah u dhintey murashaxii uu u diyaarinaayey xafiiska – waxaa ka go’an inuusan arkin awood u socota xerada mucaaradka ee Raiisel Wasaarihii hore Pascal. Affi N’Guessan.
Madaxweynayaasha qaar waxay xukunka hayeen xitaa in kabadan sadex xilli. Madaxweyne Museveni ee Ugandha wuxuu olole ugu jiray inuu gabi ahaanba meesha ka saaro xadidaada da’da ee dastuurka si uu markale u tartami karo kadib 34 sano oo uu xafiiska joogay – sida uu qabo dastuurka Uganda, madaxweynuhu ma ka yaraan karo 35 ama ka weyn 75 sano.
Wuxuu horey u tirtiray xaddidaaddii muddada. Museveni wuxuu ka mid yahay shanta madaxweyne ee ugu waqtiga dheer Africa, waxaa weheliya Teodoro Obiang Nguema Mbasogo oo u dhashay Equatorial Guinea, oo xukunka hayey ilaa 1979.
Madaxweynayaashii kale ee xukunka hayey tobanaan sano waxaa ka mid ah Paul Biya oo reer Cameroon ah – madaxweyne ilaa 1982; Denis Sassou Nguesso oo reer Congo Brazza Ville ah – oo xilka hayay in ka badan 36 sano; Idriss Deby Itno oo reer Chad ah, madaxweyne muddo 29 sano ah.
Muddooyinka dheeriga ahi waxay badanaa kiciyaan rabshado, mararka qaarkoodna waxay keenaan xukunno xabsi ah iyo dhimasho. Taasi waa halka uu ku dambeeyo Pascal N’Guessan, tusaale ahaan, oo la qabtay Sabtidii, Noofambar 7 iyada oo lagu eedeeyay argagixisanimo ka dib markii ciidammada dowladdu ay isku dhaceen mucaaradka. Iska horimaadyadaasi waxaa ku dhintay in ka badan 40 reer Ivooriyaan ah. Rajada isbedelku inta badan way sii yaraataa inta uu madaxweyne ku sii dheganaado xafiiska, inta uu xoojiyo awoodiisa, ayuu si buuxda u cabudhiyaa mucaaradka.
Bishii Luulyo 28, 2015, oo uu la hadlayey Midowga Afrika, Madaxweyne Obama wuxuu yidhi, “Marka hoggaamiye isku dayo inuu beddelo xeerarka dhexda ciyaarta si uu xafiiska u sii joogo oo keliya, taasi waxay halis u tahay degganaansho la’aan iyo isku dhac – oo badiyaa waa uun marka hore ka leexo dariiqa halista badan. ” Midowga Afrika wuxuu si joogta ah uga aamusnaa kiisaska la xiriira isbeddelada dastuurka ee xaddidaadda muddada madaxweynaha. Qaabka ku dheganaanta awoodda iyo cabudhinta dadweynaha ayaa horseeday in ay qaxaan dad badan oo Afrikaan ah, kuwaas oo ka soo cararay cadaadiska waddamadooda, una guuray dalal kale iyo gobollo (sida Maine!), Iyaga oo sii wadaya kobaca Qurba-joogta Afrika.
Maqaalka Daily Maverick, Mmusi Maimane, oo mar hoggaamiye ka ahaa South Africa’s Democratic Alliance Alliance, ayaa ku dooday, “Waxaan aragnay, waqti iyo waqti, xorriya-siiyayaashu inay xukunka la wareegaan iyadoo ay jiraan waxyaalo badan oo kacaan ah, kaliya ay u sujuudeen jirrabaadda masruufka iyo musuqmaasuqa Waxaan aragnay tiro madaxweynayaal ah oo Man weyn ah oo hanti urursanaya oo aan la qiyaasi karin muwaadiniinta caadiga ah ”. Maimane wuxuu ka digay in la joogo waqtigii budada loogu gudbin lahaa jiilasha soo koraya. “Afrika waxay u baahan tahay hoggaan cusub, dhalinyaro, iyo karti leh, iyada oo aan wax xiriir ah la lahayn dhaqdhaqaaqyadii xorriyadda ee la soo dhaafay.
PreviousRaiisel wasaare Abiy Ahmed ee Itoobiya wuxuu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah waqooyiga gobolka Tigray
NextReza Jalali inay hogaamiso Xarunta Soo Dhaweynta Muhaajiriinta ee Greater Portland